China HY303 Warp umatshini ukunitha yoMvelisi kunye noMthengisi | UAoyuan
Sebenzisa amaziko aqhagamshele i-cam-e-oyile, sebenzisa inaliti yokukhwela kunye nokuxhotyiswa nge-elektroniki, uthabathe ikomb yendlela enqamlezileyo kunye nokuhamba ngombane.
Sebenzisa amaziko aqhagamshele i-cam-e-oyile, sebenzisa inaliti yokukhwela kunye nokuxhotyiswa nge-elektroniki, uthabathe ikomb yendlela enqamlezileyo kunye nokuhamba ngombane. Inaliti ye-Crochet njengezinto eziphambili zeringi, yamkela isiphatho seentyatyambo sinokuluka ilaphu lesiphumo esikhethekileyo, esilungele ukuluka amalaphu akhethekileyo.
Isetyenziselwa ukuluka zonke iintlobo zelaphu ephezulu kakhulu, esetyenziswa ngokubanzi kumalaphu efashoni, amalaphu okuhombisa ekhaya, umzekelo, ilaphu letafile, amakhethini kunye namanye amalaphu.
Ububanzi bokusebenza 130 ”144” 216 ”
ubukhulu (ubude * ububanzi * ubude)
Umgangatho waphantsi (m2)
Amandla aphambili (kW)
isantya （r / m）
Ukuhanjiswa kwe-elektroniki, i-EBC kunye nezixhobo ezinqamlezileyo zombane (EL) zingongezwa kumatshini ngamnye. Ingasetyenziselwa umsonto osicaba okanye umsonto we-monofilament, okanye umsonto osisicaba okanye indibaniselwano yomsonto we-monofilament, ukwenzela ukuba ulwakhiwo lomatshini luhlengahlengiswe, khetha i-shaft shaft okanye isitayile se-roller okanye olunye ulwakhiwo, ngokwesigqibo esenziwe ngelaphu somthengi, ukusebenza komatshini kakhulu zilula, zilula kwaye zifundeka lula. Umatshini une-jiko elizimeleyo, i-jiko elizimeleyo, ukubhijela i-friction yabathengi ukuba bakhethe. Imodeli nganye inokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zabathengi, inkonzo ephezulu kubathengi, ukwenzela ukuba abathengi benze iimveliso ezonelisayo, ukonga iindleko, ukuphucula amandla.
Inkqubo yokwenza umatshini womatshini wokuluka wenaliti unokwahlulwahlulwa ube ngamanqanaba amathathu: ukukhulula, ukugoba, ukuvala, ukujija, ukugoba, ukukhulula, ukwenza iluphu kunye nokuzoba. Ekuqaleni kwenkqubo yokwenza iluphu, umzimba wenaliti uyaphakama ngaphambi kwenqobo yenaliti ukwenza ukuba umjikelo omdala uphume kwinaliti ukuya kwibar yenaliti, umzimba wenaliti uphakame uye kwelona nqanaba liphezulu emva koko uwe phantsi, isikhonkwane sentambo sijikeleze inaliti. umsonto wenaliti, kwangaxeshanye, isikhonkwane senaliti sithatha umsonto omtsha, emva kokuba inaliti ingundoqo kunye nomzimba wenaliti uvaliwe, umzimba wenaliti kunye nenaliti iyaqhubeka ukuwa, iluphu endala inyuka ecaleni kolwimi lwenaliti kwaye ityibilika umsonto omtsha, nentambo entsha iyagoba ukwenza iluphu, isinki emva koko itsala iarc yokulungisa eyenziwe ngumsonto omtsha ukugqibezela umjikelo wokwenza iluphu.
Egqithileyo I-HY290-ndilala kabini umatshini womthunzi welanga umatshini HY290-II umandlalo wemifuno ophindwe kabini
Okulandelayo: HY200-EW-inaliti ezimbini Bar Warp Knitting Machine